China Hot Line yamasango mveliso kunye nabenzi | Waxun
*Umgca oshushu wezibopho are izixhobo zomgca ophilayo I-Bronze ye-Alloy kunye ne-Aluminium Alloy castings inika amandla aphezulu, ukuxhathisa i-corrosion kunye nokuhambelana komqhubi.
* Ububanzi bomhlathi obandisiweyo buthetha unxibelelwano oluqhubayo lomqhubi, ukunciphisa iqondo lobushushu ngokudibeneyo, ukuhamba kancinci kokubanda komqhubi kunye nokunciphisa ukujija komqhubi ngexesha lofakelo.
* Intombazana elayishwe ngentwasahlobo ihlawula ukuhamba kobandayo kunye nokuzinzisa ukuqinisa ukungcangcazela.
* Iibholiti zamehlo zakha zibonise umhlwa simahla kunye nokwandiswa iyunifomu phantsi kulayishwa.
* Icala elibekwe ecaleni kwitephu linqanda ukubola komqhubi okanye ukubamba konxibelelwano lwe-bimetal.
* Uvavanyo oluyimpumelelo lweMijikelezo yangoku nge-ANSI C119.4 lubonelela ngesiqinisekiso sokuba i-MPS yomtya oshushu wokubamba uyakumelana nokuqina konxibelelwano olufakelwe ngokufanelekileyo.
Umqhubi weAluminiyam kunye ne-ACSR.
Yenzelwe usetyenziso oluqhelekileyo "lwentonga eshushu".
Umzimba kunye noMgcini- iAluminiyam ingxubevange
I-eyebolt-Bronze Alloy-Tin Plated
I-Eyestem - I-Bronze Alloy, eyenziweyo okanye i-Stainless Steel
Intwasahlobo (kwi-eyestem) - Yenziwe ngentsimbi
Egqithileyo I-Aluminium yomtya oshushu wempompo yamasango
umgca oshushu impompo uqinisa
umgca wokudibanisa umgca
izixhobo zomgca ophilayo